Global Voices teny Malagasy » Hetsiky Ny Mponin’i Shanghai Hanohitra Ny Fananganana Orinasa Manao Bateria Mety Hiteraka Fandotoana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Mey 2013 15:09 GMT 1	 · Mpanoratra Owen Guo Nandika Andriamifidisoa Zo
Mponina an-jatony ny mponina no nirotsaka an-dalambe nanavatsava ny moron-tanànan'i Shanghai tamin'ny 11 May 2013 hanoherana orinasam-panaovana bateria lithium, izay manamarika ny fihetsiketseha-panoherana faharoa ao anatin'ny herinandro miresaka amin'izay mety ho fandotoana ny tontolo iainana hitranga.
Tamin'ny fanombohan'ny herinandro ny nitateran'ny  [mg] Global Voices hetsika mitovitovy amin'ity tany an-tanànan'i Kunming (andrefana), izay nahitana olona an'arivony nifamory hanoherana ny fananganana fanadiovan'akora shimika izay kasain'ny fitondrana ao an-toerana atsangana.
An'arivony kilometatra any atsinanana miala avy eo, ao amin'ny distrikan'i Songjiang  any amin'ny fihaonan-dalana ara-bolan'i Shina ao Shanghai, nirotsaka ivelan'ny trano miaraka amin'ny sora-baventy eny an-tanana tamin'ny faran'ny herinandro ny mpanao fihetsiketsehana tezitra, ka tanjona iray ihany no ao an-tsaina—hanaisotra izay tetikasam-pananganana orinasa izay mety hamotika ny fiainany
Matahotra ny mponina fa mety hiteraka fandotoan-drivotra amin'ny metaly mavesatra ao amin'ny faritra mpanome rano hosotroina ao an-tanànan'ny 200 tapitrisa ilay orinasa mpamokatra lithium. Residents worry the lithium plant would cause heavy metal pollution in an area that provides much of the drinking water to the city of 20 million.
Ny sary mivezivezy amin'ny tranonkala mitovy amin'ny Twitter antsoina hoe Sina Weibo ny fisian'ny polisy manao fanamiana sy mpanao fihetsiketsehana maro manangana ambony ny totohondriny sy mihiaka teny filamatra.
Mponina manavatsava ny lalana manamorina an'i Shanghai tamin'ny 11 Mey 2013 hanohitra ny fananganana orinasa mpamokatra mpiteraka angovon'aratra vita amin'ny lithium . (sary avy amin'ny Sina Weibo )
Nialoha ny fihetsiektseha-panoherana tamin'ny asabotsy tao Shanghai, dia efa nikofokofoka hatramin'ny faran'ny volana teo ireo mpikatroka an-tserasera, izay efa niteraka hetsika mitsipitipitika tao an-tanàna. Nisy lahatsary Youtube  lazaina fa nalaina tamin'ny 1 Mey 2013 nampiseho firohotan'ny polisy maro miezaka ny hanaparitaka ny olona mivory eny an-dalambe. Mpiandraikitra polisy iray mihiaka amin'ny fanamafisam-peo fa “tsy ara-dalàna ny manao fihetsiketsehana”.
Nahasoa ny saranga antonony mihabetsaka ao Shina ny hazakazaka arahin-tosiky ny fisongan'ny harin-karena ao aminy saingy mitsontsorika kosa ny fahasalamam-bahoaka. Nisy fanadihadian'ny Ivotoerana Momba Fiantraikan'ny Fahasalamana sy ireo fikambanana mpiara-miasa maro, izay ahitana ny sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana Misahana ny Fahasalamana (OMS), namoaka fa 1,2 tapitrisa ny fahafatesana lasa aloha  tao Shina tamin'ny 2010 mifandraika amin'ny fandotoan-drivotra.
Eo amin'ny olana ara-tontolo iainana izay miharatsy dia ratsy eo amin'ny firena monja, dia miha-avo feo momba ny fandotoana eo amin'ny manodidina azy noho ny firoborobon'ny tambajotra an-tserasera izay ilazany ny alahelony, na dia miverimberina matetika aza ny sivana, ny fahamaroan'ny saranga antonony mahay mikirakira tsara ny aterineto ao Shina.
Midika izany fa indraindray tsy afa-mijery zavatra hafa ny governemanta eo anoloan'ny fanerena mihamahery avy amin'ny vahoaka.
Ho fampitoniana ny hatezeram-bahoaka, namoaka naoty  tao amin'ny Weibo ofisialiny ny fiadidiana ny distrikan'i Songjiang tamin'ny 29 Avrily, milaza fa nanapa-kevitra ny hampijanona ny famokarana rehetra ataon'ilay orinasa izy, na dia eo aza ny fanambarana  teo aloha fa tsy hokitihana ilay orinasa.
Mbola tsy matoky izany anefa ny mpiserasera maro. Ny sasany mihevitra izany ho tetikady ampiasain'ny governemanta.
“Wojiao Qinshou Buru” avy ao Shanghai nanoratra  [zh] izao ao amin'ny Weibo:
#orinasa mpamokatra bateria Guoxuan# Inona ny dikan'izany hoe hanajanona ny famokarana? Heverinareo fa vendrana ve izahay?
“Mimi Dingdong”, izay nifindra nankao Shanghai dimy taona lasa izay, namoaka imasom-bahoaka  [zh] ny fahasorenany amin'ny tsy firaharahian'ny governemanta:
Tonga teto aho dimy taona lasa izay noho ny nofinofin'ny fianakaviana — Songjiang eto Shanghai, eo amin'ny fijeriko i Shanghai dia tanàna iraisampirenena fantatra amin'ny fahitsiany sy ny rariny, sy ny vahoaka miasa mafy, ho tsara ny fiainan'izy ireo, niasa mafy aho, nividy efi-trano eto Shanghai aho, saingy mampalahelo izahay nahare momba ny tetikasa Guoxuan, na dia tsy mbola manana efitrano aza izahay. Antitra sy tanora eny an-dalambe, saingy amin'ny maso jamba no itodihan'ny governemanta, diso fanantenana tanteraka aho!
“C Zongzhuang Huoxing” nitantara  [zh] izay mitranga eny an-kianjan'ny fihetsiketsehana:
“Guoxuan miala eto, avereno amiko ny tontolo maitson'i Songjiang” hoy ny hiakan'ny olona an'arivony nanavatsava ny lalana Zhongshan ao Songjiang, tsy fantatro hoe ahoana ny havalin'ny fiadidiana ny distrika sy ny tanàna rehefa mahare izany ry zareo. Ny fananganana orinasa mitondra poizina eto Shanghai dia famelezana ny tombontsoan'ny vahoaka an-tapitrisa eto Shanghai. Mety hisy fiantraikany ho an'ny taranaky ny zafikelintsika izany!
“Gigi Xiaoxiniu” niantso  [zh] fikatrohana maro kokoa avy amin'ny olo-pirenena ao Shanghai tsirairay:
Aelezo (zarao) azafady, ny rehetra, Guoxuan mialà eto Shanghai, mialà eto Songjiang!
“Nununi” nikasika  [zh] ny tantaram-pianakaviana ho anton'ny hihetsehany ao amin'ny faritra :
Teto no nandanian'ny raibeko sy ny renibeko ny fahazazany, nandalo ny fotoana saingy mbola mitoetra hatrany ny hatsarany sy ny filaminany (fitoniany). Tsy maintsy manao izay tratry ny heriko aho hiarovana izany! Tahaka ny mponin'i Songjiang, mila miray hina isika, ary hanao fahirano ny fandotoana, tsy maintsy mandroaka ny orinasa mety ho mpandoto isika!—Valinteniko amin'ny vaovao tselatry ny orinasa mpamokatra bateria Guoxuan eto amin'ny distrikan'i Songjiang androany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/05/13/48508/
 distrikan'i Songjiang: http://www.travelchinaguide.com/package/shanghaitour4.htm
 lahatsary Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=DAQNtFkiUoY
 1,2 tapitrisa ny fahafatesana lasa aloha: http://www.nytimes.com/2013/04/02/world/asia/air-pollution-linked-to-1-2-million-deaths-in-china.html
 namoaka imasom-bahoaka: http://weibo.com/1607340912/zwfS20Pmn